1:32:00 pm ကဗျာ No comments
ကွက်လပ်တစ်ခုရဲ့ လျှို့ဝှက်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပြီ ..... ။
ဆောင်းနှင်းပွင့်တို့ နှုတ်ဆက်ကြချိန်မှာ -
စာသင်ခန်းထဲ သူရောက်လာခဲ့တယ် ...
သမိုင်းစာအုပ်ထဲက တစ်ချို့တစ်ဝက်ကို ပြင်ဆင်ခွင့်ရဖို့ -
အင်္ဂါနေ့တိုင်း ကျောင်းမလာဘူး လို့မှာထားခဲ့ဖူးတယ် ...
သူ့အိမ်မှာ ဒေါင်းတစ်ကောင် ရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပါက်သက်ပြီး -
သူမပြန်ခင်မှာ စကားနည်းနည်းပြောဖြစ်ကြတယ် ...
မင်းက ကိန်းပြည့်သဘောဆောင်တဲ့ ဗလာစာရွက်တစ်ရွက်ပါ -
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရွက်လှေချိုးပြီး ရွက်လွင့်ခဲ့သူပေါ့ ...
မင်းပင်လယ်က လှိုင်းကြမ်းလိုက်တာ ...
ငါ့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ .....
အဲဒီနောက်တော့ တော်တော် ကြာကြာ သူပျောက်နေခဲ့တယ် .....
နောက်ဆုံးအကြိမ် သူ့ကို တွေ့လိုက်တုန်းက
နောက်သုံးနှစ်ဆို လွတ်ပါပြီကွာ ...တဲ့
ပါမောက္ခတွေကိုယ်တိုင် ဝါကျအထားအသို မှာယွင်းကြတုန်းပဲ
အခုတော့ ကြိုးပြတ်သွားခဲ့ပြီလေ ...
ရေငင်ပုံးလေး နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပြီ ... နစ်မြုပ်သွားခဲ့ပါပြီ ..... ။ ။
မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ သူ
သူ လိုအပ်နေတာက သွေး
အသက်ပေးဖို့ ဝန်မလေးတဲ့ သူ
သူနဲ့တွေ့ရင် ခင်များဆိုလည်း *ဖျားမှာပဲ
လွတ်ဖို့ သိပ်မသေချာတဲ့ *ထောင်
ရှော့ခ်တိုက်ဖို့ စီမံထားတဲ့ လျှပ်စစ်တွေကြားက -
နောက်လူတွေအတွက် အသက်စွန့်ပြီး ရောက်လာခဲ့ရှာသူ
သူ ကျွန်တော့်ဆီ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ -
ကျွန်တော် မသိဟန်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ် ...
သူ *ပြန်သွားတော့မှ ယားနေတဲ့လက်ကို ကုတ်ဖဲ့ရင်း နှုတ်ဆက်လိုက်မိတယ် ...
Congratulations ... Mosqutio ... !
ခင်များ အတောင်ပံ နဲ့ ကာရံကို ကျွန်တော် ခိုးချင်တယ် ..... ။ ။
ခဏလေးပဲ အချိန်ပေးပါ ... !
ပကတိ ငြိမ်းချမ်းသော ဤကမ္ဘာမြေ
ရာသီဥတု သာယာ၍ -
ကံကြမ္မာဟာ တစ်ဦး တစ်ယောက်စီတိုင်းဘက်မှ -
မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့သည် ..... ။
( ဒါက - မက်လက်စ အိပ်မက်အပိုင်းအစ )
လူတွေ ... လူတွေ .....
မသိခြင်းတွေ ခင်းကျင်းထားတဲ့လမ်းမပေါ် -
နားမလည်စွာ လျှောက်သွားမိတဲ့ လူတွေ ...
မနေ့ကအမှားတွေနဲ့ နေသားကျလာတဲ့ ဘဝ
ဒီနေ့အတွက် အမှန်တရားကို ခုချိန်ထိရှာမတွေ့ခဲ့ရင် -
မနက်ဖြန်ဟာ အရင်လို အပျိုစင် မဟုတ်တော့ဘူး ...
ကျွန်တော်က ရင်ထဲရှိသလောက်ပဲ အရာထင်ချင်ခဲ့တာပါ -
အားလုံးသော ခလေးတွေအတွက် ခဏလေးတော့ အချိန်ပေး ဗျာ ... !
... ခ ဏ လေးပဲ အချိန်ပေးပါ ... !
သူတို့လေးတွေ ဘာကိုယုံကြည်ရမလဲ ... ?
သူတို့လေးတွေ ဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်မလဲ ... ?
အခုလို အော်ပရေးရှင်းခန်းထဲကထွက်မလာသေးတဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် -
Google search engine နဲ့ စာနာစိတ် ကို ရှာဖွေမိတယ် ..... ။ ။
မမ်မိုရီထဲမှာ တန်ပိုတွေ များလွန်းလို့ ...
အလွမ်းတစ်ချို့ကို သော့ခတ်ထားချင်လည်း ...
" ... မင်း ဘယ်လောက်ပဲ မူးမူး သတိရခြင်းတွေက လူမမှားဘူး ... " တဲ့
ပင့်ကူအိမ်ထဲ ခုန်ချလိုက်ပါတယ် ..... ။
Password ထည့်ထားတဲ့ ငါ့မျှော်လင့်ချက်က -
* ယုယုယယနဲ့ အတူတကွနေကြမယ့် နေ့လေး *
စာရင်း ဇယားနဲ့ အတိကျဖော်ပြရရင်
သေချာရေရာမှုမရှိသေးတဲ့ နေ့စွဲတစ်ခုပေါ့ ...
ရင်ဘက်ထဲက ပြည့်နက်နေလည်း -
အိပ်ကပ်ထဲမှာ လေခိုနေတော့ -
နံနက်စောစောမှာပဲ နေဝင်ခံခဲ့ရတယ် ..... ။
ငါ့ဘက်က သက်သေတွေ သုံညနဲ့ ညီမျှသ၍ -
မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ သံသယ ဝင်နိုင်ပါတယ်လေ .....
အကူအညီလိုတိုင်း ဘုရားသခင်ကို ဖုန်းဆက်ရမှာလား ... ?
မင်းနားလည်အောင် စကားထာဖွက်ရရင် -
ဆုတောင်းခြင်းကို ဘယ်က စရမှန်းမသိခဲ့သူပါ ..... ။ ။
ရုပ်သေး တစ်ရုပ်ရဲ့ အနာဂါတ်
ချစ်သူက အမုန်း စကားဆိုတယ် ...
အလိုလို ကျလာတဲ့ မျက်ရည်ရဲ့သဘာဝမှာ -
အိပ်စက်ခြင်းတွေ ပျောက်ရှခဲ့ရ ..... ။
လက်တွေ့ကျကျ မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ် ...
( နှစ် ထဲက တစ်ကို နုတ်ရင် ဘာကျန်မလဲ )
သင်္ချာလိုတွက်ရင်တော့ ရှင်းရှင်းလေးပေါ့ -
အချစ်စစ်ရဲ့ သီအိုရီမှာတော့ -
နှစ် ထဲက တစ်ကို နုတ်ရင် ရင်ကွဲပက်လက်ကျန်ခဲ့မှာပါ ..... ။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က ကဗျာတစ်ပုဒ်ဆို -
အချစ် အက္ခရာကို ဘယ်မှာ သွားရှာမလဲ ... ?
သူ - မရှိလို့မဖြစ်တာသိရက်နဲ့
ဒီရင်ဘက်ကို ကြက်ခြေခတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာလား ....
ကကြိုးတွေ ပေးခဲ့ပါဦးသခင် ..... ။ ။
မငိုနဲ့တော့ ချစ်သူရေ ...
မုန်တိုင်းကို ဘယ်သူဖိတ်ခေါ်ခဲ့တာလဲ ... ?
အဖြေကို ရှာမတွေ့ခင်မှာပဲ -
- အညာဒေသမှာ အသံမဲ့ မိုးတွေက ရွာ .....
ဝင်းမှည့်နေတဲ့ ဟာရီကိန်းတစ်ခုက -
- ငါ့ရင်ဘက်ပေါ်ကို တည့်တည့် မတ်မတ်ကြွေ အကျ -
- ချစ်သူ ခမျာမှာလည်း
မိုးဆွေနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို ဘယ်လိုကုသ ရမလဲ မသိရှာခဲ့ ...
နောက်ဆိုရင် အနားမှာပဲ ရှိနေတော့မှာပါ .....
ချစ်သူကို ချော့တဲ့ ငါ့အားပေးစကားတွေက
ဘာကြောင့်များ ငိုသံတွေ စိုရွှဲနေရတာလဲ ... ?
ခလေးငယ် တစ်ယောက်ရယ် ...
ခိုကိုးရာမဲ့ မျှော်ငေးနေမလား ... ?
အကြိမ်ကြိမ်ကြေကွဲ ပါတယ် ..... ။
အိုမာခရမ် နဲ့ တာရာမင်းဝေရဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုလေးလို
သူမကို မြတ်နိုးခဲ့ပါတယ် .....
အချစ် နဲ့ စစ် ဆိုတာ နှစ်ခုလုံး မတရားပါဘူး
သူရဲကောင်းမဖြစ်ရင်လည်း နေပါစေ ...
ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ ပဲ ပေးဆပ်လိုက်မယ် ..... ။ ။
ဖိတွယ်တတ်တာဆိုရင် …. ။
မကွယ်မဝှက် ဖွင့်ပြောတတ်တာဆိုရင် … ။
တစ်ခုတည်းအတွက် ကြံစည်တာဆိုရင် …. ။
အထက်စီးက ဆက်ဆံခွင့်ရတာဆိုရင် …. ။
ရာသက်ပန် ဖျက်သိမ်းးးးး ဆိုတာလေး
ကမ္ဘာပြားအဖွဲ့ ကိုတည်ထောင်မယ်
ကွမ်းကလပ်ပဲ့ ကို ကိုင်ဆောင်ပြိးတော့
ဆော့ခရေတီ နဲ့ အတူအဆိပ်ခွက်
မောင်းထုတ်ဖို့မားဆိုးလ်နဲ့အတူ
သတိမြဲသူရဲ့ ဘ၀ကူးထက် ကတိမြဲတဲ့အရာ
ဒီသံသရာမှာ ဘာမှမရှိဘူး.....။ ။
မေမေ ရေ ...
အရိုင်းအစိုင်းမာယာတွေနဲ့တွေ့တိုင်း ခေါ်နေမိတာ အကြိမ်ကြိမ်ပေါ့
လောကဓံ ဘယ်နှစ်ပါးဖြစ်ဖြစ် ထမ်းထားမှာပဲ ဆိုတဲ့ လူမျိုး
လာမယ့် အန္တရာယ် ရင်ဆိုင်တွေ့ ...
အဲဒီလို... ကျွန်တော့် ထမင်းပန်းကန်လေးကို ဖြည့်ဖြည့်ပေးခဲ့တာ ကြာပေါ့
ဒီလိုဆိုတော့လည်း မတရားဘူးနော် မေမေ...
မေမေ့ရင်ထဲကို ဆူးတွေထိုးထိုးသွင်းနေတဲ့ လူဆိုးလေးကျွန်တော်ပါ
မေတ္တာတရားကို တာဝန်မကျေခဲ့တဲ့ လူမိုက်ကျွန်တော်ပါ
အခုမှ နောင်တတွေနဲ့ မျက်ရည်ဝဲ
အဝေးကပဲ ရှိခိုး ဦးချနေရပါပြီ မေမေရယ်
"မေမေရဲ့သားနိုင်တယ်" ဇော်ဝင်းထွဋ်သီချင်းလေး ဆိုချင်တာပေါ့
အခုတော့ မေမေ့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံး
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ လက်မမြောက်ခဲ့ပါဘူး
မေမေ့ရင်ထဲ ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပဲ ရွာသွန်းစေဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရွာမယ့်မိုးပါ မေမေ
ဒီကဗျာလေးနဲ့ စ မယ်နော်။
အိမ်က ထမင်းဝိုင်းလေးလည်း နေရာတွေ လွတ်လို့ လပ်လို့ နေမှာ
အဲဒီတစ်နေ့နေ့မှာ မိသားစုကောင်းကင်ထဲ အတူတူ ပျံသန်းကြမယ်
ပျော်ရွှင်ခြင်း အတောင်ပံတွေ ဖြန့်လို့ပေါ့။
အဲဒီတစ်နေ့နေ့မှာ ကျွန်တော်ဟာ မေမေ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခိုနားနေတဲ့
မေမေ့ရဲ့ မေတ္တာဖြင့် ပြည့်ပါစေသား
ငါ့ အိပ်မက်တွေကို ဆွဲဆွဲထုတ်ပြတယ်...။
ဟိုး... အဝေးကြီးကို ပျံသန်းပျောက်ကွယ်သွားတယ်။
ဘာမှ ရှိနေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
မလိမ်မိုး မလိမ္မာနဲ့... ငါကသာ
မင်းကို အခါခါ ယုံခဲ့တယ်...။
ငါ့ အိပ်မက်တောင်ယာကို ခုတ်လှဲ
ဟောဒီမှာ ... ငါဆိုတဲ့ကောင်က
ကျနော်လေးစားရတဲ့ စာရေးဆရာ ကဗျာဆရာ (ကို) မင်းခိုက်စိုးစန် ရေးထားတာပါ ..
အမေကမွေး အပြင်ကကျွေးလို့ လူဖြစ်လာရတဲ့ ကျွန်တော် ဘ၀ခရီအစ မလှတဲ့ခြေလှမ်း မညီတဲ့အပြုံး ဘယ်သူမှမမုန်းအောင် နေခဲ့ရသူပါ အမေ.... မူကြိုအရွယ်ကလေးကဗျာတွေ အတူဆိုကြတော့ကျွန်တော့် နှုတ်ကဖွင့်ဟမရဆွံ့ အခဲ့လို့ဆရာမက အပြုံးလေးနဲ့ နှစ်သိမ့် ပေးအိပ်တာတောင် အိပ်မပျော်ခဲ့သူပါ "အမေ" မူလတန်းအရွယ်စာသင်ခန်းအလယ် အမေအကြောင်း တစ်ခွန်းတစ်ပေါက်တစ်ယောက်မကျန် ခွန်းတောက်ဆိုလည်း ကျွန်တော်မပါနိုင်ခဲ့ဘူး``အမေ´´ အချိန်လွန်မြောက်အရွယ်ရောက်တော့ သားသိတဲ့ ``အမေ´´ သားရှိတဲ့ ``အမေ´´ ဘာကြောင့်မတူတာလဲ ``အမေ´´ ၀တ္ထုထဲက ``အမေ´` ရုပ်ရှင်ထဲက ``အမေ´´ သားဘ၀ထဲက ``အမေ´´ ဘာများကွားလို့ မတူတာလဲ``အမေ´´ အမေမနမ်းဖူးတဲ့ ပါး အမေးမသတ်ဖူးတဲ့ ဒီကျော ဘယ်သူ့ကိုမှ့ သားမပေးခဲ့ ပါဘူး``အမေ´´ စိတ်တွေလေလွင့် အိမ့်မက်လိုက်ဖမ်း အဆိပ်ပင်ရေဖျန်းမိလို့ သားဘ၀ပျက်ခဲ့ ဖူးပါတယ်``အမေ´´ DRUG တွေနဲ့ဖက် နွံမှာနစ်လည်း စိတ်ကိုပြန်တင်း အတင်းထလားခဲ သူပါ``အမေ´´ နှလုံးသားတစ်ခု အချစ်တုအတွက် သက်မဲ့ အသဲ ပလတ်စတစ်ရုပ်လည်း ဈေးကြီးပေးဝယ်ခဲ့ သူပါ``အမေ´´ ``အမေ´´ မသိခဲ့တာလား မသိချင်းတာလား ``အမေ´´ ရယ် သားတကယ် ထိခဲ့ ရတာတွေပါ ``အမေ့ နို့ဖိုးသားစပ်ချင်လည်း ``အမေ့´` နို့ရည် တစ်ပေါက်သာမျှ မသောက်ခဲ့ ရသူဟာဒီသားပါ``အမေ´´ ဟိုယခင်အဝေး ငယ်စဉ်ကျေးက ``မေမေ့´` ရင်ခွင်သားမ၀င်ဖူးလို့ ဒီသားမိုက်အပေါ် အချစ်ပျယ်လေသလား ``မေမေ´´ ရယ်
' တောင် ' ဖြိုဝံ့တဲ့အမေ..
' ခါး ' လည်းချိနေရောပေါ့...
အမေ့အတွက် ' အား ' ဖြစ်သတဲ့လားအမေ...
' ရှင်သန်နေထိုင်မှု ' ဆိုတဲ့အရာကို
' မိဘ ' ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်...
အမေ့ရင်မှာ မချိဘူး ' တဲ့....
" သားငယ်ဘေးရန်ကင်းပါစေ ...."
ပျော်နေတဲ့ငါ့ဘ၀ကို
ငါးငံပြာရည်...တဲ့...........
ငပိကို မီးမြှိုက်လို့ 
ငရုပ်သီးစပ်စပ်နဲ့ရောလို့ ထောင်း
လျှာပေါ်မှာ မြက်ပြန်ရော.. ........
အသားတော့ လာမထိနဲ့ 
♥♥ရေးသားချိန်♥♥ 7:11 AM No comments: ♥♥ရေးသူ♥